लिडेंमुसा मौसम परिवर्तनको सूचक जनावर - Science Dialog
ताज उपडेट / फिचर / रोचक
हिमाली देश नेपालमा पर्न सक्ने जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यान तान्न सन् २०१० मा नेपालको मन्त्री परिषदको वैठक सगरमाथाको कालापत्थरमा बस्यो । त्यही साल समुद्री सतह भन्दा केही मिटर मात्र माथि रहेको देश माल्दिभ्सले आफ्नो मन्त्रिमण्डलको बैठक समुद्रको सतह मुनि राख्यो । यी दुई उदाहरणबाट हामी मौसम परिवर्तनमा विभिन्न मुलुकहरुका सरकारहरुको ध्यानाकर्षण राम्ररी नै भइरहेको बुझ्न सक्छौं । मौसम परिवर्तनले मानव जीवन र देशको भौगोलिक अवस्थामा मात्र नभई उच्च हिमाली भेगमा वसोवास गर्ने सानो स्तनधारी जनावर लिडें मुसाको जीवनमा पनि परेको हुन्छ ।
लिडें मुसा खरायो प्रजातीमा पर्ने सानो जीव हो । यो जीव नेपाल, चीन, भारत, जापान, रसिया र अमेरिकामा पाइन्छ । नेपालमा बोलीचालीको भाषामा लिडें मुसालाई स्थान अनुसार भ्रागोम्जिन, फ्याउमुसा, खरमुसा, आब्रा, हुन्द्र्र्रा, कुम्चेन, पक्पु खोम्जीन आदि नामले चिनिन्छ । संसारमा ३० प्रजातिका लिडें मुसा भएको जानकारी पाइन्छ । नेपालमा यस प्राणीका ५ प्रजातिहरु रहेको अभिलेख
छ । Ochotona curzoniae, O. nubrice, O. thibetana, O. roylai, O. macrotis वैज्ञानिक नाम दिइएका लिडें मुसा हाम्रो देशमा सामान्य वन्यजन्तुको हैसियतमा सूचिकृत छ ।
लिडें मुसाको तौल हालसम्म पाइएका प्रजाति अनुसार १२० देखि १५० ग्रामसम्मको पाइएको छ । यिनीहरुको शरीरको लम्बाई १५ देखि २० से । मी। को हुन्छ । लिडें मुसा एकल बस्न मन पराउने जनावर हो । यिनका बच्चाहरु ढुङ्गाको कापको बीचमा एक आपसमा जिस्किएर खेलिरहेको देख्न
सकिन्छ । यिनीहरुले हिउँदको जाडो समयको निम्ति दैनिक रुपमा हरियो घाँस आफ्नो दुलोमा जम्मा गर्ने गर्छन् । यिनीहरुले जम्मा गरेको घाँसको न्यानोमा केही हिमाली चराहरु बस्ने गर्छन् साथै त्यसलाई अन्य जनावरहरुले पनि आहाराको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको अभिलेख छ । यसै कारण लिडें मुसालाई उच्च हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय पारिस्थिति र पद्धती अध्ययनको लागि मुख्य उपयोगी जीव (Key Stone) प्रजातिको रुपमा चिनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको गम्भिर असर जैविक विविधतामा पर्ने अनुमान गरेको छ । IPCC, 2007 को प्रतिवेदन अनुसार यो शताब्दीको अन्त्यमा विश्वको तापमान ६।४ डिग्री सेल्सेस्ले बढ्ने छ । यो प्रभाबबाट हिमाली देश नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । साथै यहाँ वसोवास गर्ने सानो र सुन्दर जनावर लिडें मुसा पनि यसबाट मुक्ति हुन सक्दैन । लिडें मुसा तापमान वृद्धि प्रति अत्यन्तै सम्वेदनशील जनावर मानिन्छ । यो अत्यन्तै चिसो क्षेत्रमा वसोवास गर्ने भएर पनि हिउँदमा लामो आराम (Hibernation) मा जाँदैन । यसको शरीरमा पातलो छाला हुन्छ । यसको शरीरको तापमान करिब १०४।२ डिग्री फरेन्हाइट् पाइएको छ । जुन यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने अन्य जनावरको भन्दा ५९७ डिग्री फरेन्हाइट् ले बढी नै हो । शरीर द्यबकब िदहन प्रक्रिया (Metabolic Rate) बढी हुनु र शरीरको ताप बाहिर प्रवाह गर्न नसक्नुले यसलाई तापक्रम प्रति बढी सम्वेदनशील बनाएको हो । लिडें मुसालाई दुलो बाहिर तापक्रम २९ डिग्री सेल्सेस् भन्दा माथि राखेमा उच्च तापक्रम (Hyperthermia) को कारण मृत्यु हुन्छ । त्यसैले विश्वको उष्णीकरण लिडें मुसाको अस्तित्वको निम्ति सधै खतरा हुन सक्छ ।
प्राप्त भएका अवशेषहरुको अध्ययनको तथ्य अनुसार मंगोलियामा पाईने लिडें मुसा (O. pallasi) को संख्या तीव्र रुपमा घट्दै गइरहेको छ । त्यहाँ उत्खनन गरिएका अवशेषहरु मध्ये ४००० बर्ष अघिका अवशेषहरु यस लिडें मुसाको हाडको अंश २३।६ प्रतिशत थियो । तर यो प्रतिशत १५००९२००० बर्ष पुराना अवशेषहरुमा ७।३ प्रतिशत छ भने २०० बर्ष सम्म पुराना अवशेषहरुमा मात्र ०।४ प्रतिशत छ । यो घटनाले उष्णीकरण बढ्दै गएको मंगोलियाको दक्षिणी भागमा लिडें मुसा घट्दै गएको देखिन्छ । अर्को अध्ययन अनुसार त्यहाँ पाईने लाटोकोसेरोको दिसा ( Pellets) मा लिडें मुसाको हाडहरुको अंश ३८ प्रतिशत हुन्थ्यो हाल यो २१ प्रतिशत भन्दा कम पाइएको छ । अहिले भएको मरुभूमी इरान र टर्कीको सीमा क्षेत्रमा एक प्रकारको चीलको विष्ठामा सन् २००६ मा लिडें मुसाको हाड भेटाइएको थियो । रुफेन्सेन्स् प्रजातिको लिडें मुसा इतिहासको कालखण्डमा इरान, टर्की जस्ता उष्ण तापक्रम हुने देशमा रहेर अहिले लोप भएको घटनाले पनि यो प्राणी तापक्रम वृद्धि प्रति बढी प्रतिक्रियात्मक रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
अमेरिकाको ग्रेट बासिन (Great Basin) क्षेत्रमा हालै गरेको अनुसन्धानबाट त्यहाँ पाइने O. Princeps प्रजाति त्यहाँको २५ मध्ये सात वासस्थानमा लोप भएका छन् । यसरी जलवायु परिवर्तनको कारणले लोप भएकै कारण अमेरिकी कानूनमा यसलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा सूचिकृत गरेको थियो ।
नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका विभिन्न संकेतहरु देखिन थालेका छन् । वर्षामा हुने गडबडी, फुलहरु समय भन्दा अगाडि नै फुल्न थाल्नु, हिमालमा हिउँको सतह घट्नु साथै हिमपात हुने उचाई बढ्दै जानु, आदि । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१० देखि २०१२ सम्मको छोटो अवधिको अध्ययनबाट लिडें मुसाको दुईवटा वासस्थानमा अन्त्य भइसकेको देखिएको छ । लाङटाङ उपत्यकाबाट केही घण्टाको पैदल दुरीमा पर्ने मुन्डु गाँउ र सिन्दुम गाँउको बीचमा एक खोल्सा बग्ने गर्छ । लाङटाङ दोस्रोबाट हिउँ पग्लेर आएको पानी बग्ने उक्त खोल्सामा २०६८ चैत्र महिनामा ठूलो हिउँ पहिरो आयो । हिउँ पहिरोले सिम्दुम गाँउमा २ जना मानिस, केही भेडा, एक घोडाको मृत्यु भयो साथै केही घरहरु नष्ट भए । त्यस खोल्सा वरपरका ढुङ्गाका कापहरुमा लिडें मुसाको वासस्थान थियो । जहाँका सबै ढुङ्गा हिम पहिरोले ल्याएको धूलो, माटो र हिउँले पुरेको थियो । त्यहाँ विगत २ वर्ष देखि लिडें मुसा देखिएको छैन । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको गोसाइकुण्डको उत्तरी किनारमा प्रशस्त लिडें मुसाको वासस्थान
थियो । सन् १९७१, १९७२ मा केही जापानी वैज्ञानिक र सन् १९९४, १९९७, २०१०, २०११ मा केही नेपालीहरुले गरेको अनुसन्धानमा यस बारे उल्लेख गरेका छन् । तर यहाँ सन् २०१२ को मार्च महिना देखि लिडें मुसा देखिन छोडेको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको तापमान वृद्धिको विश्लेषण गर्दा विगत २५ बर्षमा यहाँको दैनिक न्युनतम तापक्रम नियमित रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । अधिकतम तापक्रममा थोरै मात्र उतारचढाव भएमा पनि न्युनतम तापक्रम त्यस अनुपातमा अत्याधिक बढीरहेको छ । यस अक्टोवर९ नोभेम्वर महिना बाहेक अन्य महिनामा बर्षाको मात्रा घट्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७२ मा २८०० मीटर उचाइ देखि शुरु हुने भनी ब्याख्या गरिएका लिडें मुसा सन् १९९७ का अनुसन्धानकर्ताहरुले ३००० मीटर भन्दा तल देखेनन् । हाल यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा लिडें मुसाको वासस्थान ३०६५ मीटर भन्दा तल छैन । यसप्रकार लिडेमुसाको बासस्थानको उचाई बढ्दै जानुमा जलवायु परिवर्तन पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हुन सक्दछ । के लिडें मुसा जलवायु परिवर्तन कै कारण लोप समेत हँुन सक्ला ? जलवायु परिवर्तनको प्रभावले उनीहरुको आनीबानी, ब्यवहार र बासस्थानमा परिवर्तन भएका छन् । यो पारिस्थितिक पद्दतीमा लिडें मुसामा अरु जीवहरु प्नि आश्रित छन् । त्यसैले हाम्रो जैविक विविधतामा मौसम परिवर्तनको असरको सूचना लिडेंमुसाले दिन सक्ने प्रबल संभावना छ । के हाम्रो देशमा पनि लिडेंमुसा मौसम परिवर्तनको सूचक जीव होला ?
लेखकः नारायण प्रसाद कोजु
साभारः विज्ञान लेखमाला, नास्ट
ग्रामीण सूचना प्रविधि केन्द्र अलपत्र अवस्थामा
Next story प्लास्टिक झोला प्रयोग गरे ५० हजार जरिबाना
Previous story बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त